त्यो रात, धन्न हामी काठमान्डु आयौं । नभए आज म के हुँदो हुँ ? संसार कहाँ देख्दो हुँ ? ती केही आईसी नोटले हामीलाई संसार देखाए । त्यसैको आँटले हामीलाई बस चढायो । यो पापी खाल्टोमा कहिले भोकै पेट त कहिले आधा पेट । कहिले किराना पसल त कहिले चिया दोकान । कहिले तरकारी पसल त कहिले भात होटल गर्दै वर्षौं बिते । हजुरआमा, म आफैं भीर काट्न सक्ने भएको छु । आफैंले कमाएर खान सक्ने भएको छु । बिहे गरेर छोरी पाल्न सक्ने भइसकेको छु । त्यो पटुकाको आईसी नोट नभए पनि बस चढ्न सक्ने भएको छु । जाने त सबै उतै हो तर तपाईंका सम्झनाले सताइरहेनछन् । धन्यवाद, हजुरआमा । तपाईंको स्वर्गमा बास होस् । प्रकाशित : असार ७, २०७६ १०:५१